Ra'iisul Wasaraaha Britain oo beddelay mowqifkiisii ku wajahnaa kooxda Taalibaan - Caasimada Online
Home Dunida Ra’iisul Wasaraaha Britain oo beddelay mowqifkiisii ku wajahnaa kooxda Taalibaan
Ra’iisul Wasaraaha Britain oo beddelay mowqifkiisii ku wajahnaa kooxda Taalibaan
London (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa beddelay mowqifkiisii ku wajahnaa kooxda Taalibaan, isaga oo sheegay in Britain ay la shaqeyn doonto kooxdaas haddii ay lagama maarmaan noqoto.
Hadalkan ayaa ka duwan kii Johnson kasoo yeeray Toddobaadkii tegay markii Taalibaan ay la wareegtay gacan ku haynta Afghanistan, markaasi oo uu sheegay in UK aysan marnaba aqoonsan doonin kooxdaas.
“Waxa aan doonayo inaan u xaqiijiyo shacabka ayaa ah dadaalladeena siyaasadeed ee ku aadan xal u helista Afghanistan. La-shaqeynta Taalibaan, haddii lagama maarmaan noqoto, dabcan way dhici doontaa,” ayuu yiri Johnson.
Hadalka Johnson ayaa imanaya ayada oo shalay, Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu taageero u muujiyey kooxda Taalibaan kana digay cadaadiska ay dalalka Reer Galbeedka isku dayayaan inay kooxdaas saaraan.
Madaxweyne Putin oo hadlayey kadib kulan uu Moscow kula yeeshay ra’iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, ayaa sheegay in dalalka kale ee caalamka, oo uu la jeedo reer galbeedka, aysan qiyamkooda ku qasbin kuna soo rogin Afghanistan.
Johnson ayaa dhinaca kale sheegay in xaaladda garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kabul, halkaasi oo ku xoomeen kumanaan qof oo reer Afghanistan ah, si ay dalka uga cararaan, inay hadda soo wanaagsaneyso.
Dowladda Britain ayaa sheegay inay xaqiijisay daad-gureynta 1,615 oo qof, tan iyo Sabtidii tagtay, oo ay ku jiraan 399 qof oo British ah, 230 shaqaalaha safaaradda ah, iyo 420 qof oo Afghans ah.